Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » Iinqanawa ezimbini zokuhamba ngeenqanawa ezifowuna e-Ocho Rios Jamaica Kule Veki
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Ukubambisa • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
IJamaica yokhenketho lokuhamba ngenqanawa
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett, utyhile ukuba iinqanawa ezimbini zokuhamba ngenqanawa ziya kubiza i-Ocho Rios Port kule veki. Olu phuhliso, uMphathiswa ugxininisa, bubungqina obukhulayo bemfuno ekhulayo yokuya eJamaica kunye nempumelelo yemizamo yokuvula kwakhona icandelo lezokhenketho.
I-MSC Meraviglia ibuyela kwizibuko le-Ocho Rios ngolwesiBini, nge-21 kaSeptemba, kwifowuni yokuqala kwezintlanu ukuya ku-Novemba.
I-Carnival Sunrise iya kuma e-Jamaica kuhambo lwayo lokubuya ngoLwesithathu, nge-22 kaSeptemba.
Ngokubuya kwabahambi ababemisa okokoko ukusukela nge-Juni 2020, iJamaica ibona ukukhula okuzinzileyo kushishino lokhenketho lokuhamba ngenqanawa.
“Eli wonga liphumelele i-MSC Meraviglia libuyela kwizibuko lase-Ocho Rios ngolwesiBini, umhla wamashumi amabini ananye kwinyanga yoMsintsi. Nangona inabantu abamalunga nama-21 abakhweli kunye nabasebenzi, izakubeka ezibukweni nabantu abayi-7,000 ngenxa yomgaqo-nkqubo we-COVID-2,833, utshilo uMphathiswa uBartlett.
I-MSC Meraviglia yayiyeyona nqanawa yokugqibela yokuhamba ngenqanawa yokungena ngenqanawe eJamaica ekuqaleni kuka-2020 xa kwabakho ubhubhane we-COVID-19, enyanzelisa ukuvalwa kwemida yamazwe aphesheya kwesi siqithi.
Enye inqanawa eyayimisa e-Jamaica, ukuya kwizibuko e-Ocho Rios, yiCarnival Sunrise kuhambo lwayo lokubuya ngolwe-Lwesithathu Septemba 22. Ukuphuma kweCarnival yayisisikhephe sokuqala ukutyelela esi siqithi njengoko iJamaica yaphinda yavula ikhenketho ngoMvulo, nge-16 ka-Agasti kwaye iya kwenza iminxeba eli-11 ukuya kuthi ga kuDisemba.
"Ukuhamba ngenqanawa ngenqanawa kubaluleke kakhulu ekuvuseleleni icandelo lezokhenketho, kwaye sibona ukubuyiswa kweenqanawa okwamkelekileyo ngokwamkela ukuba iiNdlela eziQinisekileyo zaseJamaica zinika indawo ekhuselekileyo kubakhenkethi bethu, abasebenzi bezokhenketho kunye noluntu ngokubanzi," utshilo uMphathiswa uBartlett.
"Ngokubuya kokufika kwabahambi ukususela ngo-Juni 2020, besikubona ukukhula okuzinzileyo ukuya kwinqanaba le-COVID-19 kwaye ngoku ishishini lokuhambisa ngenqanawa libuyile, sijonge phambili ekukhuleni okukhulu kumanani ethu," wongeza. .
Umnumzana Bartlett uthi iJamaica ilungiselelwe kakuhle ukubizwa kweenqanawa zokuhamba ngenqanawa njengoko zonke iimfuno zibekiwe ukufezekisa iiprothokholi zamanye amazwe nezasekhaya zezeMpilo kunye ne-Wellness COVID-19 protocols, kwaye abakhweli balinganiselwe ekushukumeni ngaphakathi kwiRelior Corridors.
“Ndimele ndigxininise ukuba iinqanawa zokuhamba ngenqanawa kufuneka zihlangabezane namanyathelo angqongqo alawula ukuqala kwakhona kokuhamba ngenqanawa, ezifuna ukuba malunga neepesenti ezingama-95 zabakhweli kunye nabasebenzi bagonywe ngokupheleleyo kwaye bonke abakhweli banike ubungqina beziphumo ezibi kuvavanyo lwe-COVID-19 olwenziwe ngaphakathi Iiyure ezingama-72 zokuhamba ngenqanawa. Kwimeko yabakhweli abangagonywanga, njengabantwana, kuvavanywa i-PCR, kwaye bonke abakhweli bayavavanywa kwaye bavavanywe (i-antigen) ekuqaleni, ”ucacisile uMphathiswa uBartlett.
Ngokusekwe kwiishedyuli ukuza kuthi ga ngoku, uMphathiswa u-Bartlett uthi iJamaica ilindele ukuba kubekho iifowuni zenqanawa ezingama-20 ngaphambi kokuphela konyaka.